DAAWO;-Puntland oo 11 sano kabacdi Calankeeda kataagaysa Laascaanood – Marqaanmedia24.com
Wariye Ka tirsan Puntalnd ayaa muqaal yaab leh ka Diyaariyay dagaalkii Shalay Dhexmaray maleeshiyaadka Somaliland iyo Ciidamada Puntland.
AKHRISO:War murtiyeed Shirki maamul Goboleedyada Baydhabo laga Soo saaray
Boowee GADHOOWE difaaco laaascaanod lahaanee kkkkkkk waleee shalay jabkii idinku dhacay mid ka weeyn baa soosocdaa.
Kkkkk hello dhabayaco MA I maqashaan.. WAR af wax laguma qabsado.af madhan ayaad haaydaan ee rag la kaalaya oo rasaasta u dhabar adaayga ee af wax MA qabto kkkkkk ITAAL BARANBARO.KKK QUDHAANYADII AYAA YAABTAY
* LIBINTU WELI WEEYE *
Tolka Dhulbahante in dulliga iyo sumcad darada 10 sano humaagga ku ahaa mar uun laga dul qaado waa guul iyo gobanimo aan la qiyaasi karin runtii. Annagu Soomaali muslim na ah oo dhiig kala gasha ku ma faraxsanin iyada oo ay weliba bisha barakeysan ee Ramadhaan inoo bilatay. Hase yeesho ee 10 sano ayaa kuwa dulmiga waday loo dulqaadanayay oo looga la tudhayay jabkan ku dhacay iyo mid ka sii xun ba. Gobta Harti xishoodkoodii Islaamnimo iyo wanaaggii Soomaalinimo ee ay muddadaas xeerinayeen inta qalad loo fasirtay ayaa weliba kadinkoodii daandaansi loo la soo istaagay. Dee cid damiir leh ee saqajaannimadaas oo kale aqbali kartaa ma ay jirto sida hadda ba bayaan loo caddeeyay. Aarka libaax haddii uu kaa gaabsado marka aad godkiisa oogu dul timaaddo waxa kaa raaci doona cid waliba way ogtahay.
Anigu waxaan aaminsanahay in ay libintii dhabta ahayd weli dhimman tahay oo waxaana weeye in ay Hartiga iyo tolweynahooda guud ee reer Puntland dib u soo nooleeystaan falsafaddii aasaasiga ahayd ee sha’nigooda, masiirkooda, aayahooda, sumcaddooda, tolnimadooda iyo jiritaankooda ka tarjumaysay. Waxaa waajib ah in shimbirkii dib loo soo kiciyo oo la dajisto qaddiyad dhab ah ee inta ay tolweynahan habacsanaantii iyo qaladaadkii hore ka saarto weliba ka gaashaanta waxii dhacay wax la mid ah in ay dib dambe u dhacaan. Falsafaddooda uun baa Eebbe ka sokow tolweynahan qumaati isugu duubi karta oo qaddiyaddooda Puntlandnimo si dhab ah ugu mideyn karta. Siyaasaddii fashilkii hore dhalisay waa in hadda la masaxaa oo tan asalka ah degdeg loo haybsadaa si mansabka uu tolweynahani xaqa u leeyahay loo solansiiyo oo uu ugu naaloodo.
Kkkkkk kkkkk kkkkkk
Kkkkk kkkkkk kkkkk kkkkkk
TANAGOOW SAXARADA KA DUL KAC KKK KKK
Alaa habrihii maxa ku dhacayee. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ciidankii galgala kaga keenay imisaa aakhiraystay,hadaa diidaan runta tacsida iyo sabta garoowe ayaa marag furtay boowayaal